Sidee Shabaab ugu suurogashay burburinta garoonkii cusbaa ee Buula-Burde? - Bulsho News
Burburka soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Buula burde
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacmay qaraxyo lagu weerarray dhismaha cusub ee garoonka Buula-burde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Qaraxyada oo lagu xiray dhisme cusub oo loogu talagalay dadka ka dhoofaya ama ka soo dagaya garoonka inay sii maraan ayaa gabi ahaanba dhulka lagu daray sida ay muujinyaan sawiro laga soo qaaday.
Guddoomiyaha magaalada Buulo-burde ayaa BBC u sheegay in buburka garoonka uu ka dhashay markii qarax lagu aasay garoonka gudihiisa iyo qarax kale oo la geliyay matoor yaallay dhismaha garoonka kaas oo markii dambe dad ay ku dhaawacmeen.
“Waxaa lagu aasay garoonka gudihiisa, daaro laga dhisay baa jiray, daarihii iyadoo aan xilkii laisku wareejinin ayay xaley soo galeen, daartii waxay ku garaaceen qarax waa burburiyeen, matoor meesha yaallay hoostiisa waxaa la geliyay qarax kale “
“Saakay markii aan ku baxnay oo aan meeshii tegnay, ninkii gacanta ku qabtay matoorka ayaa qaraxii uu ku kacay, waxaa meesha ku dhaawacmay shan qof” ayuu yiri guddoomiyaha.
Shabaab sidey ku gashay garoonka
Guddoomiyaha Buula-burde ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha lais dhihi karo waxay horseedeen in kooxihii weerarka soo qaaday inay ka faa’ideysteen.
Wuxuu sheegay in tirada ilaalada garoonka oo yareyd iyo garoonka oo aan si wanaagsan u deyrneyn ayaa kooxaha u fududeeyay inay burburiyaan garoonkii cusbaa ee dhawaan laga dhisay Buula Burde.
“Waxay kusoo galeen dayac ku yimid waardiyeyaashii goobta joogay koley iyaga laftooda yaraa, waxaa laga yabaa in ciidan ka badan meesha soo galay, sidaa darteed waxay sababtay in garoonka ay gudaha u galaan maadama silig uu ku wareegsan yahay”
Axmed Mahad Nuur ayaa intaa ku daray in wax iska hor imaad ah uusan ka dhicin garoonka maadama dadkii ka dambeeyay dhacdada ay xaley si dhuumaaleysi ah ay goobta kusoo galeen si qarax ay ugu hoos duugaan dhismaha garoonka.
“Si tuugonimo ayay kusoo galeen sida dagaal ah kuma imaan, wax dagaal ah kama dhicin meesha”
Guddoomiyaha degmada Buula-Burde ayaa sheegay in gebi ahaanba uu burburay garoonka isla markaaana aysan jirin wax rajo ah oo laga qabo haatan isticmaalkiisa.
Garoonka ayaa ahaa mid si wanaagsan loo qalabeeyay, waxaana mashruuca dhistaankiisa fulinayay Midowga Yurub, dadweynaha ayaa si weyn uga dhuursugayay furitaanka dhismahan cusub si ay ugu nastaan marka ay diyaaradaha ka raacayaan garoonka Buula-burde oo hadda la burburiyay.
“Ma leh, awalba ma laheyn, hadda markii koowaad oo la dhiso ayay aheyd oo aan rajeyneynay in bulshada ay kusii nasato maadama uu garoonka ka baxsan yahay magaalada, waa markii ugu horreysay oo dhismahan laga dhiso garoonka” ayuu yiri Axmed Mahad Nuur.
Waxaana garoonka gaaray ciidamada militeriga Soomaaliya oo baaritaano ka wado garooonka la burburiyay.